जापानको निर्यातमा किन निरन्तर गिरावट ?
टोकियो, जापान । जापानको निर्यात दरमा गत फेब्रुअरीमा पनि गिरावट देखिएको जापान सरकारले सोमबार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जापानको निर्यातमा गत डिसेम्बरदेखि निरन्तर तेस्रो महिनासम्म गिरावट देखिएको हो । हुनत जापानको आयात दर पनि यो समयमा घटेको देखिएको छ ।
प्रियंकाले सुरु गरिन् गंगायात्रा
प्रयागराज, भारत । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसकी नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गान्धी भद्राले सोमबारदेखि गंगायात्रा सुरु गरेकी छिन् । उत्तर प्रदेशको मैँयाघाटमा पर्ने प्रयागराजबाट डुङ्गामा चढेर उनले तीन दिने यात्रा सुरु गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । उनको यात्रा काशीसम्म हुनेछ ।
मालबाहक रेल लिकबाहिर गएपछि दुर्घटनाग्रस्तः ३० जनाकाे मृत्यु
किन्सासा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको केसाइमा भएको मालबाहक रेल दुर्घटनामा परी कम्तिमा ३० जनाको मृत्यु भएको यहाँका अधिकारीले सोमबार जनाएका छन् ।
यी हुन् युकेका सबैभन्दा धनी दश व्यक्तिहरु, कसको कति छ सम्पत्ति ?
एजेन्सी । युकेमा ठुलो संघर्ष र परिश्रम गरेपछि अर्वपति बन्न सफल भएका छन् ।
सिमफरोपोल, क्रिमिया । युक्रेनबाट क्रिमियालाई रुसमा गाभेको पाँचौं वर्षगाँठका अवसरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन क्रिमिया पुगेका छन् ।
वासिङ्टन । ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्न आइतबार वासिङ्टन डिसी आइपुगेका छन् । दुबै राष्ट्रपतिले मुख्यरुपमा भेनेजुएला सङ्कटका बारेमा छलफल गर्ने समाचारमा जनाइएको छ ।
वेलिङटन । न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री जासिन्दा एर्डेनले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा १० दिनभित्र बन्दुक सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्ने धारणा राखेका छन् ।
सलमान खानभन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीका फेसबुक फलोअस धेरै, थाहा पाउनुहोस् कसका कति फेसुबक फलोअर्स ?
काठमाडौँभन्दा पनि प्रदुषित छन् यी शहरहरु ?
सन् २०१० को तथ्याङ्क पल्टाउने हो भने फोक्सोको क्यानसरका कारण २,२३,००० जनाको मृत्यु भएको थियो ।